‘मोस्ट वान्टेड’ गिरोहका मुख्य नाइके प्रदिप यादब………..! – Khabar PatrikaNp
‘मोस्ट वान्टेड’ गिरोहका मुख्य नाइके प्रदिप यादब………..!
August 25, 2020 35
विराटनगर स् भारतबाटै नेपालमा हतियार र लागूऔषधको सञ्जाल विस्तार गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको छ। गिरोहका मुख्य नाइके एक भारतीय नागरिक विराटनगर महानगरपालिका–१६ दरैयाबाट पक्राउ परेका छन्। गिरोहमा आबद्ध रहेकाले सीमा क्षेत्रअन्तर्गत भारतीय भूमिमा बसेर नेपालको प्रदेश १ र २ तथा काठमाडौं उपत्यकासम्म सञ्जाल विस्तार गरेर साना हतियार एवं लागूऔषध ‘सप्लाई’ गरिरहेको फेला परेको हो। नेपालमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेका व्यक्तिसँग उत्ताm गिरोहको सोझो सम्पर्क रहेको प्रहरीले पत्ता लगाएको छ। पक्रा उ पर्नेमा प्रहरीको ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा रहेका भारतको अररिया जिल्ला इन्द्रनगर ग्राम पञ्चायत–१० टिकुलिया बस्तीका ३९ वर्षीय बग्गा भनिने प्रदीप यादव रहेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईले बताए।
यादव हा तहति४ यार र लागूऔषध मुद्दामा मोरङ प्रहरीको सर्वाधिक खोजी सूचीमा रहेका व्यक्ति हुन्। उनी यही मुद्दामा फरार प्रतिवादीको सूचीमा थिए। उनलाई शनिबार साँझ प्रहरीको विशेष टोलीले पक्राउ गरेको प्रवक्ता राईको भनाइ छ। उनका अनुसार भाग्न खोजेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन सामान्य बल प्रयोग गर्नु परेको थियो। त्यस क्रममा यादवको शरीरमा सामान्य चोट लागेको छ। डीएसपी राईले भने, ‘उनलाई पक्रा० उ गर्न सामान्य बल प्रयोग र धेरै संघर्ष गर्नु प¥यो।’ यादवको साथबाट प्रहरीले लागूऔषध डाइलेक्स डीसी १५ बोतल, नाइट्रोसन ५० चक्की र नाइट्राभेट ५१ चक्की बरामद गरेको छ। ‘पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गर्दा भारतबाट नेपालमा सञ्जाल विस्तार गर्ने र हतियार एवं लागूऔषधको ‘सप्लाई’ गर्ने गिरोहको नेतृत्व गरिरहेको पाइयो’, राईले भने। कसलाई पु¥याउन आएका थिए भन्ने खुल्न बाँकी छ।अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखिएको छ ।
यसअघि हति यार र लागूऔषधसहित पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले पनि भारतमा बसेर यादवले आफूहरूलाई सहयोग गरिरहेको बयान दिएपछि प्रहरी अनुसन्धान उनीमाथि सोझिएको थियो। भारतमा बसेर नेपालमा आपराधिक समूहको सञ्जाल बनाउँदै हतियार र लागूऔषध पठाउने मुख्य भूमिकामा केही वर्षदेखि यादवको संलग्नता रहँदै आएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको जानकारी राईले दिए। यादवविरुद्ध आइतबार लागूऔषध ऐनअन्तर्गतको मुद्दा चलाउन म्याद थप गरेर अनुसन्धान थालेको प्रहरीले उनीसँग जोडिएको मुद्दाको पुरानो फायल पल्टाएर पटकेमा कारबाही अघि बढाउने भएको छ।
यस्तो छ बग्गाको आप राधिक पृष्ठभूमि – विराटनगर महानगरपालिका–१६ बाट प्रहरीले २०७५ मंसिर ३ गते ‘मेड इन् यूएसए’ लेखेको अटोमेटिक पेस्तोल र ४ राउन्ड गोलीसहित २ जना पक्राउ ग¥यो। पक्राउ पर्नेमा उदयपुरको उदयपुरगढी गापा–१९ का मन्दीप तामाङ र सुनसरीको दुहवी घर भई इटहरी उपमहानगरपालिका–१२ खनारमा बस्दै आएका ३५ वर्षीय सुशीलकुमार साहु थिए। अनुसन्धानबाट उक्त पेस्तोल बग्गाले तामाङमार्फत साहुले प्राप्त गर्ने गरी पठाएको खुलेको थियो। प्रहरीले चलाएको हात हतियार खरखजाना मुद्दामा अदालतले तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दियो भने साहुलाई ५ लाख धरौटी मागेको थियो। धरौटीबापतको रकम तिर्न नसक्दा साहु पनि थुनामै पुगेका थिए। अझै पनि यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै छ। तर, यही मुद्दामा जोडिएका भारतबाट हति यार ‘सप्लाई’ गर्ने मुख्य भूमिकामा रहेका यादव भने फरार थिए।
२०७५ मंसिर ८ गते विराटनगर–१६ बाटै स्थानीय २२ वर्षीय विद्यानन्द मन्डल, २० वर्षीय अनुप गिरी ३ सय ८० एम्पुल लागूऔषध र १ सय ५ ग्राम, १ सय १० मिलिग्राम ब्राउन सुगर र हतिया रसहित प क्राउ परे। शरीरमा टेपले बाँधेर लागूऔषध ल्याएका उनीहरूसँगै एउटा कटुवा पेस्तोल र दुई राउन्ड गोली पनि बरामद भएको थियो। प्रहरी अनुसन्धानबाट उत्ताm पेस्तोल र लागूऔषध मण्डल र गिरीले सुनसरीको धरान घर भई ललितपुर महानगरपालिका–४ एकान्तकुनामा डेरा बस्ने ४१ वर्षीय रूपम राईलाई दिन ल्याएको खुलेको छ। विराटनगर–११ स्थित बसपार्कमा राईको हात लगाउने तयारी हुँदै गर्दा मण्डल र गिरी पक्राउ परेका थिए। अनुसन्धानका क्रममा राईलाई पनि प्रहरीले पक्रा उ गरेर तीनै जनाविरुद्ध हात हति यार खरखजाना र लागूऔषध ऐनअन्तर्गतको मुद्दा चलायो।
अनुसन्धानबाट उक्त लागूऔषध र हतियार बग्गाले नै पठाएको खुलेपछि उनलाई पनि प्रतिवादी बनाएर प्रहरीले मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। जिल्ला अदालत मोरङले मण्डल, गिरी र राईलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। हति यार र लागूऔषध ‘सप्लाई’ गर्ने यादव भने फरार थिए। अहिले यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छ।
Prevघाटमा आयो संक्रमणको खबर, ४०० मलामी भागाभाग…….!
Nextभुलेर पनि गर्नु हुँदैन मंगलबारका दिन यी पाँच काम !
दुई लाखमा किनेको भैँसी ८१ लाखमा बिक्री, दूधकाे विश्व रेकर्ड…